Inona no ho hita sy atao ao an-tanànan'i Belfast | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hita sy atao ao an-tanànan'i Belfast
Susana Garcia | | General, Irlandy
La renivohitr'i Irlandy Avaratra Efa hatry ny ela izy no nijanona ho toerana feno fifandonana ka ho lasa tanàna mahaliana iray hafa hankafizany ny arabe sy ny toerana mahaliana. Izany no antony mahatonga antsika anio hahita zavatra hitsidika sy hataontsika ao an-tanànan'i Belfast.
Belfast dia tanàna kely, Ka io no iray amin'ireo toeran-kaleha izay tonga lafatra mandritra ny fialantsasatra lava amin'ny faran'ny herinandro, satria hitantsika lalindalina izany afaka andro vitsivitsy. Tanàna mahaliana izy izay feno tantara sy trano fisotroana, trano fisakafoanana ary toerana misy fahitana mahafinaritra ihany koa.
1 Jereo ny manodidina an'i Titanic
2 Zavakanto an-dalambe any Belfast
3 Ankafizo ny zaridaina botanika milamina
4 Tsidiho ny trano fisotroana
5 Mifalia amin'ny distrikan'ny katedraly
6 Miakatra any Cavehill
7 Andramo ireo vokatra mahazatra ao amin'ny tsenan'i St. George
8 Mianara momba ny tantarany ao amin'ny tranombakoka Ulster
Jereo ny manodidina an'i Titanic
Manomboka amin'ny iray amin'ireo faritra maoderina indrindra eto Belfast izahay, ary eo no misy ny tanàna nisy ny taloha Tranon-tsambo Harland & Wolff, ary toerana nananganana ilay sambo an-dranomasina angano Titanic. Tao koa ireo sambo manaitra hafa teraka izay nanana vintana tsara kokoa noho ilay Titanic mampalahelo. Ao amin'ity faritra ity no manamarina ny lasa indostrialy avonavon'ny tanàna, izay toa hadinon'ny fifanolanana anatiny. Amin'ity faritra ity dia azontsika atao ny mitsidika ny SS Nomadic, izay replika kely an'ny Titanic, ary mitsidika ireo studio izay maka sary ny Games of Thrones. Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny tranombakoka Titanic, trano maoderina izay ahafahantsika mianatra bebe kokoa momba ny tantaran'ity sambo ity.
Zavakanto an-dalambe any Belfast
Ny zavatra iray hafa izay azo atao manodidina ny tanànan'i Belfast dia mahita zava-kanto an-tanàn-dehibe, miaraka amin'ny hosodoko sy graffiti mahavariana. Ny kanto an-tanàn-dehibe dia hita amin'ny lafiny rehetra, tsy mila mamaky ny arabe fotsiny isika mba hahitana ireo sary hosodoko feno loko mahafinaritra sy mahavariana izay tototry ny tanàna.
Ankafizo ny zaridaina botanika milamina
Any akaikin'ny University of Queens, izay fitsidihana mahaliana iray hafa noho ny hatsaran'ny tranony, no zaridaina botanialy mahafinaritra, izay ahafahanao mankafy fialan-tsasatra kely eo afovoan'ny fitsidihana ny tanàna. Izy io dia zaridaina iray izay tsy miankina taloha ary nanjary fantatry ny besinimaro. Izy io dia manana trano fonenana roa, ny tsara indrindra dia ny Palm House, misy faritra roa, ny iray milay ary ny iray kosa miaraka amin'ny toetrandro tropikaly.
Tsidiho ny trano fisotroana
Tsy afaka mandeha any Belfast ianao raha tsy mitsidika ireo trano fisotroana lehibe ao aminy. Ny salona toaka satro-boninahitra io no iray amin'ireo marika famantarana indrindra. Ao amin'ny tranobe miendrika Victoria, dia nijoro hatramin'ny taonjato faha-XNUMX, ka tsy misy toerana tsara kokoa ahazoana pint mahazatra noho ity pub tsara tarehy ity. Ao anatiny dia afaka mankafy pub tsy mampino isika, miaraka amin'ny ala voasokitra, taila ary vera voaloto. Mifanohitra amin'ny trano fisotroana no tranobe Grand Opera House. Ankoatry ny fitsidihana ity trano fisotroana ity dia afaka mandeha any amin'ireo maoderina hafa isika any amin'ny faritra velona indrindra eto an-tanàna, saingy tsy isalasalana fa kilasika izay tsy tokony hodianay io.
Mifalia amin'ny distrikan'ny katedraly
Ny manodidina ny Katedraly o Katedralin'ny telovolana Izy io dia iray amin'ireo faritra velona indrindra any Belfast ankehitriny. Toerana maoderina sy eklektika ity, izay nonenan'ireo mpivarotra taloha, ary feno hetsika sy fialamboly ankehitriny. Manomboka ao amin'ny Katedraly St. Anne, izay ahafahantsika miditra amin'ny arabe mba hahitana toerana vaovao, izay misy koa sary hosodoko sy graffiti.
Miakatra any Cavehill
El Trano Belfast Any amin'ny sisin'ny tanàna izy io, any amin'ny havoanan'i havoana Cave. Amin'izao fotoana izao dia afaka miditra ao amin'ny trano mimanda ianao ary mahita azy io fa tsy mila misoratra anarana amin'ny fitsangatsanganana voatondro, ary tsy andoavam-bola. Ankoatr'izay, avy amin'ireo havoana ireo dia hanana fomba fijery mahafinaritra isika. Mety haharitra tolakandro ny fitsidihana, ka tsara kokoa raha mora ny mahita ilay trano mimanda miaraka amin'ny antsipiriany rehetra sy ny manodidina. Fantatra ihany koa io trano mimanda io satria raha ny angano dia tsara vintana ihany ny mponin'ny trano mimanda raha mbola saka fotsy no mipetraka ao.
Andramo ireo vokatra mahazatra ao amin'ny tsenan'i St. George
Miverina any an-tanànan'i Belfast izahay ary raha noana dia afaka mijanona eo amin'ny tsenan'i St. George. Ity tsena ity dia iray amin'ireo zavatra tafavoaka tamin'ny vanim-potoana Victorian tao an-tanàna. Manomboka amin'ny zoma ka hatramin'ny alahady Izy io dia rehefa manokatra izy ireo, hatramin'ny telo tolakandro, miaraka amin'ny atmosfera tsara indrindra miaraka amin'ny vokatra vaovao, pinchos ary mozika mivantana indraindray. Ny toerana mety hanandramana ny gastr gastrikan'ny tanàna. Mila mandeha mamaky ny fivarotana ianao mba hanandrana zava-baovao ary hividianana ireo antsipiriany mahazatra izay tsy mety very rehefa miverina mody isika.
Mianara momba ny tantarany ao amin'ny tranombakoka Ulster
Ny Museum Ulster dia ao amin'ny anatiny ny zaridaina botanika avy any Belfast, ka afaka mitsidika toerana roa indray mandeha isika. Io no tranombakoka lehibe indrindra any Irlandy Avaratra ary misy ny karazan-javatra rehetra, manomboka amin'ny fampirantiana hosodoko ka hatrany amin'ny arkeolojia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Inona no ho hita sy atao ao an-tanànan'i Belfast
5 mikasa ny hankafy ny fahavaratra any Madrid
Hong Kong escalators, fitsangatsanganana mahafinaritra tokoa